प्रधानमन्त्रीले बिराटनगरमा के भने ? – नेपाल डायरी डट कम
मार्च 13, 2007 by nepaldiary
प्रधानमन्त्रीले बिराटनगरमा के भने ?
गणतन्त्र घोषणाको पक्षमा प्रधानमन्त्रीको वक्तव्य आउदैछ, प्रचण्डले भनेका छन् ?
गणतन्त्रको सम्बन्धमा वक्तव्य आउने-नआउने कुरा होइन । गणतन्त्रको निम्ति परिस्थितिले बाध्य बनाउछ मानिसलाई । अहिले राजाले जुन किसिमको वक्तव्य दिए, त्यसले अस्थिरता चाहने तत्त्वलाई मद्दत गरेको छ । गणतन्त्रको बाटो राजाले नै खोलिदिएका छन् । त्यो कुरा हो सायद प्रचण्डले भनेको । राजाले पनि आफ्नो व्यवहार र क्रियाकलापबाट देशमा अस्थिरता निम्त्याए भने सबै गणतन्त्रको बाटोमा जान्छन् ।
राजाले बाटो खोलिदिइसकेपछि गणतन्त्र घोषणा गर्न किन ढिला भइरहेको छ त ?
घोषणा गर्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन । ’cause एक प्रकारले घोषणा भइसकेको छ । संविधानसभाको पहिलो बैठकमा राजतन्त्रको भविष्यको फैसला हुनेछ ।
रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएको भए राजालाई कारबाही हुन्थ्यो ?
रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेको छ । प्रतिवेदन संसदमा आएपछि पारित हुन्छ ।
सबैलाई स्पेस दिने भन्नुभएको छ । राजालाई के स्पेस दिने ?
त्यो पुरानो कुरा भइसक्यो । राजाले गलत बुझे । राजालाई त्यतिबेला स्पेस दिने भनेको अस्थिरता दिने भनेको होइन । (राजा र अधिराजकुमार -युवराजाधिराज -) ले राजगद्दी छाडेपछि अथवा छोडेको भए राम्रो हुन्थ्यो र त्यसपछिको अवस्थामा चैं स्पेस दिने कुरा गरेको हु । अब पनि राजाले मैले गद्दी छाडे भन्छन् भने त्यसले नया वातावरण सिर्जना गर्छ ।
राजाको वक्तव्यपछि संसदबाट उनलाई कारबाही गरिने भनिएको थियो, त्यो के भयो ?
त्यो कारबाही प्रक्रिया चलिरहेको छ । सुविधा, सम्पत्ति, सेना र कर्मचारी कटौती प्रक्रिया चलिराखेकाछन् ।
के आर्मी परिचालन हुन्छ ?
होइन, आर्मी परिचालन होइन, सुरक्षाकर्मी भनेको सशस्त्र र प्रहरी फोर्स परिचालन हुन्छ भनेको हो ।
तर्राईको आन्दोलन बन्द, हडताल कहिलेसम्म रहन्छ त ?
परिस्थिती ले नया कुरा जन्माउछ । हिजोसम्म बन्द गर्नेहरूमात्र थिए । अब खुलाउन नाराबाजी भइरहेको छ । भोलि अर्को आवाज आउछ । त्यसैले मैले सबैलाई धर्य गर्न भनेको छु । आन्दोलनरत पक्षसग मेरो पनि वार्ता भइरहेको छ । म राजधानी फर्किएपछि वार्ता टुंगिन्छ । सबैभन्दा मलाई गाह्रो त्यसको लिडर को हो भन्ने समस्या छ । कसैले भन्छन्, गृहमन्त्रीको राजिनामा चाहियो । ठीकै छ, अपरिहार्य कोही पनि हुदैन । गृहमन्त्रीलाई जहिले पनि हटाउन सकिन्छ । तर यथार्थमा मैले धेरै कुरा बुझेको छु । गृहमन्त्रीको राजिनामापछि आन्दोलन बन्द हुन्छ कि हुदैन – आन्दोलन बन्द हुन्छ भने गृहमन्त्री त के जनतालेसुख शान्ती पाउछन् भने प्रधानमन्त्री पनि राजिनामा दिन तयार छ । तर आन्दोलन बन्द भएन भने नि – यो कुरामा राजनीतिक खेल पनि छ । तपाईंहरूले यो बुझ्नुभएको छैन । तास खेलेको जस्तै मसग त एउटै कार्ड छ, गृहमन्त्रीको कार्ड । म त त्यो कार्ड देखाइदिन्छु । फ्याकिदिन्छु, तर त्यो फाइनल हुनुपर्‍यो नि । फाइनल नभइकन मैले कार्ड देखाए भने फेरि अर्को समस्या उत्पन्न हुन्छ । त्यसकारण गृहमन्त्रीलाई राजिनामा गराउने हो भने उनीहरूले यत्ति गर्र्छौ भन्न सक्नुपर्‍यो नि । ग्यारेन्टी गर्छन् भने म जतिखेर पनि गृहमन्त्रीको राजिनामा गराउन तयार छु । नभए त कार्ड पनि फ्याक्नु अनि हार्नु पनि, यो त भएन नि ।मेरो उपेन्द्र यादवसग सोझै पनि वार्ता भइरहेको छ । उनी पनि टाढाका मान्छे होइनन् । सुनसरीकै मेरै निर्वाचन क्षेत्रका मान्छे हुन् ।
सरकारको उपस्थिति कही पनि देखिदैन । शान्ति सुरक्षाको स्थिति मुलुकमा छैन नि प्रधानमन्त्रीज्यू ?
सान्ती सुरक्षाको स्थिति छैन भनेर प्रधानमन्त्री पनि भन्छ, बुझ्नुभो – तर शान्ति सुरक्षाको विन्दुमा हामी पुगेका छौ । हामी कडाइ गर्ने स्थितिमा पुगेका छौ । कडाइ सुरु भइसक्यो । माओवादीलाई अन्तरिम सरकारमा ल्याइसकेपछि सशक्त रूपले सरकार अघि बढ्नुपर्छ । जथाभावी शान्तिसुरक्षा बिगार्नु हुदैन । आठ पार्टी को बैठकमा एउटा प्रस्ताव आउदैछ । राजमार्ग, उद्योग, कलकारखाना, शैक्षिक संस्था, भन्सार नाकाहरूलाई बन्द-हडताल निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने । त्यो पारित भएपछि सरकार कडा रूपमा अघि बढ्छ ।
फोरमको आन्दोलन माओवादीको साख गिराउन सरकारले नै चलाएको भन्छन् नि ?
सरकारले चलाएको भन्ने कुरा गलत हो । सरकारले आन्दोलन चलाएर, भाडेर जनतालाई सास्ती दिदैन । तर त्यहा घुसपैठचैं छ । ’cause जुनसुकै आन्दोलनमा पनि घुसपैठ हुन्छ । त्यो प्राकृतिक कुरा हो । कुनै न कुनै तत्त्वहरू आन्दोलनमा घुस्छन् नै ।
अब हामी गणतन्त्रको बाटोमा…?
मेरो भनाइ के भने राजाकै व्यवहार र क्रियाकलापले गणतन्त्रको बाटो खुलेको छ । खोल्दिए राजाले नै । नचाहिदो वक्तव्य र क्रियाकलापले गर्दा उनले आफ्नो घुडामा आफैं बञ्चरो हाने भन्ने हो मेरो भनाइ हो । सबभन्दा पहिले बुद्धि पुर्‍याएर राजा र युवराज दुवैले मुकुट र गद्दी त्यागेको भए राम्रो किसिमको वातावरण बन्ने थियो, उनीहरूका लागि पनि । तर त्यसो गर्नुको साटो वक्तव्य चलखेल बढाए ।
गणतन्त्रको घोषणा अब कसले गर्छ ?
गणतन्त्रको घोषणा संविधानसभाले गर्छ । के भन्छन्, त्यो मलाई थाहा छैन । तर संविधानसभाको पहिलो बैठकले घोषणा गर्ने पारित गरिसकिएको त्यो फिर्ता हुदैन । त्योभन्दा चाडै गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने अर्कै कुरा हो । त्योभन्दा अघि घोषणा गर्नुभन्दा राजाले नै स्टेपडाउन (त्याग) गर्दिए हुन्छ ।
राजाले स्टेपडाउन’ घोषणा गरे भने संविधानसभाको पहिलो बैठकले राजाको ’boutमा निर्णय भन्ने घोषणा भएको छ, त्योचैं के हुन्छ – संविधानसभाले के गर्न सक्छ ?
त्यो म भन्न सक्दिन । नेपाली कांग्रेसको सभापति मैले छोडे भने तपाईं के गर्न सक्नुहुन्छ – घच्याडेर ल्याउनुहुन्छ –
प्रचण्डले (अमेरिकी अधिकारीको हत्या षडयन्त्र…’bout) दिएको अभिव्यक्तिप्रति प्रधानमन्त्रीज्यूको धारणा के छ ?
कुनै पनि कुरा बोल्दा सोचविचार गर्नुपर्छ । भावना र आवेशमा आएर गर्नु हुदैन । यदि यो यथार्थ हो भने भोलि उहा सरकारमा आउनु हुदैछ, सरकारलाई पहिले जानकारी दिनुपथ्र्यो । अमेरिकी दूतावासलाई जानकारी दिनुपथ्र्यो । एक्कासी र्सवसाधारणलाई जानकारी दिदा उहाहरूप्रतिको विश्वासमा कमी आउछ । अन्तराष्ट्रीय समुदायको भावना बुझेरमात्र बोल्नुपर्छ ।
प्रचण्डको अभिव्यक्तिले अन्तरिम सरकार गठनको प्रक्रियामा असर पुर्‍याउछ ?
असर पुर्‍याउदैन । तर एउटा पार्टी को जिम्मेवार नेताले युवा किसिमले बोल्न हुदैन भन्ने मेरो आग्रह हो । हामी छौं, सरकार छ, प्रधानमन्त्री छ, तर हामीलाई नभनेर जनतालाई भन्दा अन्तराष्ट्रीय समुदायमा उहाप्रति नराम्रो सन्देश जाने, विश्वासको वातावरणमा संकट आउने काम नगर्नोस् भन्ने मेरो आग्रह हो ।
स्रोत :- कान्तीपुर दैनीक
अघिल्लो राजा गद्दी छोड- प्रधानमन्त्री
अर्को माओबादी को “गोयबल्स “शैली-